Homeकोरोना अपडेटआज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस् विवरण
August 27, 2020 admin कोरोना अपडेट, समाचार 21006
नेपालमा विहीबार थप १ हजार १११ जनामा कोरो’ना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भए’को छ । यो सँगै कोरोना संक्र’मितको संख्या ३५ हजार ५२९ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्राल’यका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विहीबार नियमित ला’इभ अपडेटमा उक्त जानकारी दिएका हुन् । मन्त्रा’लयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या १५ हजार २७३ रहेको छ ।
डा गौतमका अनुसार प्रदेश १ का जिल्ला’हरुमा खोटाङका एकजना, मोरङका २० जना, संखुवासभाका ४ ज’ना र सुनसरीका ३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै प्रदेश २ का जिल्ला’हरुमा धनुषा’का ४९ जना, पर्साका ८५ जना, बाराका ३० जना, महोत्तरीका ७ जना, रौतहटका १५ जना, सप्तरीका २२ जना, सर्लाहीका ६ जना र सिरहाका ७ जना’मा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
यस्तै बागमती प्रदेशका जिल्ला’हरुमा काठमाडौंका २७०, काभ्रेका १३ जना, चितवनका ४५ जना, दोल’खाका २ जना, धादिङका एकजना, नुवाकोटका ७ जनामा पुष्टी भएको छ,
भक्तपुरका ४१ जना, मकवानपु’रका ६३ जना, रामेछापका ६ जना र ललितपुर’का ६६ जना, सिन्धुपाल्चोकका ३ जना र सि’न्धुलीका ५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशका जिल्लाह’रुमा कास्कीका २ जना, गोरखाका एकजना, तनहुँका ११ जना, नवलपरासी पूर्वका १७ जना, पर्वतका एकजना, लमजुङ’का ३ र बाग्लुङका ८ जनामा कोरोना संक्र’मण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै प्रदेश ५ का जिल्लाहरुमा कपि’लवस्तुका २१ जना, गुल्मीका ३ जना, दाङका २ जना, नवल’परासीका १८ जना, प्युठानका ४ जना, बर्दियाका एक’जना, बाँकेका ७५ जना र रुप’न्देहीका ७२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका जिल्लाह’रुमा जाजरकोटका ५ जना, दैलेखका १२ जना, सुर्खेतका ९ जनामा को’रोना पुष्टि भएको छ । यस्तै सुदूरपश्तिम प्रदेशमा कंचन’पुरका ६ जना, कैला’लीका २० डोटीका ६ जना, बझाङका एकजना र बैतडीका १७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
२४ घण्टामा थप ५६९ जना कोरोना संक्रमणमुक्त
पछिल्लो २४ घण्टा’मा थप ५६९ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै ने’पालमा कोरोना संक्र’मण भएर निको हुने’को संख्या हालसम्म २० हजार ७३ पुगेको छ ।
उनीहरू देशका विभिन्न स्थान’का अस्पतालबाट संक्र’मणमुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जन’संख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यसअघि बुधबारको तथ्यांकअनुसार नेपाल’मा कोरोना संक्र’मणमुक्त हुनेको संख्या १९ हजार ५०४ थियो ।
मन्त्रालय’का अनुसार बुधबारसम्म कोरोना’का कारण ज्या’न गु’माउनेको संख्या १७५ पुगेको थियो । आज थप ८ जनाको कोरोनाले मृ त्यु भएसँगै ज्या’न गुमा’उनेको संख्या १८३ पुगेको छ ।
आज मृत्यु हुनेमा ५ जना महिला र ३ जना पुरुष गरी ८ जना रहेका छन् । जसमा काठमा’डौंका ४८ वर्षका एक’जना पुरुष, ललितपुरकी ६५ वर्षकी एक महिला, बाराका २३ वर्षकी एक म’हिला, पर्साका ६२ वर्षका एक पुरुष रहेका छन् ।
यस्तै कास्कीका ३२ वर्षकी महिला, कपिल’वस्तुका ५० वर्षका एक पुरुष, रुपन्देहीकी ७० वर्षकी एक महि’ला र बाँकेकी ७० वर्षकी एक महिला छन् । – खबर हब
दक्षिण कोरियाको अस्पतालमा दुई नेपालीको श’व अलपत्र…
August 26, 2020 admin कोरोना अपडेट 6408
April 11, 2021 admin समाचार 5592
नारायणहिटी राजदरवारको बाहिरियो यस्तो दु’र्लभ भिडियो, अब सर्वसाधारणले पनि हेर्न पाउने (भिडियो हे’र्नुहोस्)
March 16, 2021 admin समाचार 4628
नारायणहिटी दरबारभित्रको एक भिडियो बा’हिरिएको छ । त्यहाँ भएको फिल्म हलको भिडिायो बाहि’रिएको हो । त्यहाँ फिल्म हल पनि रहेको कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । यो ११६ जना मानिसहरु बसेर सिनेमा हेर्न मिल्ने हल